Yiziphi izinhlobo zebhayisikili eziyishumi eziphezulu? - Izimpendulo Ezihamba Phambili
Main > Izimpendulo Ezihamba Phambili > Amagama emikhiqizo yebhayisikili - ungabhekana kanjani nakho
Amagama emikhiqizo yebhayisikili - ungabhekana kanjani nakho
Yiziphi izinhlobo zebhayisikili eziyishumi eziphezulu?
I-Top 10Okuhamba phambiliIbhayisikili Brandsemhlabeni
Isizini yomjaho yango-2016 siyinkumbulo ekude nje, kepha manje sesibe nesikhathi sokucabanga ngo-2016 omangalisayo kwiWorld Tour. Ukunqoba okumangalisayo kukaMat Hayman eParis-Roubaix. USteven Kruijswijk usondela ngendlela emangalisayo, kabuhlungu esondela ekunqobeni iGiro d'Italia, kanti uPeter Sagan wenze umsebenzi omuhle ngokumangazayo njengompetha womhlaba unyaka wonke.
Kepha ngenkathi sazi ukuthi abagibeli uqobo lwabo babaluleke kakhulu, manje sifuna ukwazi ukuthi imaphi amabhayisikili ababalethile lapho. NjengoMat Hayman akagcinanga ngokunqoba iParis-Roubaix, kodwa futhi nesithuthuthu se-aero. Yebo.
Ngakho-ke sesihlunge ithani ledatha futhi manje sesikulungele ukukulethela uhlu lokugcina lwamabhayisikili emigwaqo ayishumi aphumelele kakhulu ku-2016. Kodwa sikwenze kanjani lokho kahle, ngizwa ubuza? Sisebenzise izibalo. Futhi siyinkunzi yezibalo, ngakho-ke sacela usizo lochwepheshe wezibalo ogama lakhe linguDaffyd Thomas futhi sakha iWorld Tour of Bikes ndawonye.
Yonke imijaho yeWorld Tour nezigaba zayo ezifanele yafakwa etafuleni futhi amaphuzu anikezwa. Kodwa-ke, siyasola ukuthi iningi lenu, njengathi, alihambisani nokunikezwa kwamaphoyinti ku-UCI World Tour. Uzojabula ukuzwa ukuthi sikubhale kabusha.
Yiqiniso. Imijaho efana neParis-Roubaix neTour of Flanders, izinhlanga ezihlonishwayo zosuku olulodwa, manje zithola amaphuzu amaningi e-GCN kunamaphuzu we-UCI. Ingqikithi yeTour de France ingamaphuzu ayi-100 we-GCN, iParis-Roubaix manje ingamaphoyinti angama-80 we-GCN.
Kepha ukunqoba kwesiteji eTour de France kuletha amaphuzu amaningi ngokulingana. Ngakho-ke manje kufanele unqobe izigaba ezinhlanu ukuthola amaphuzu afanayo ne-Tour de France jikelele. - Kuyamangalisa, futhi asikaqedi nalapho.
Sinezinye izibalo eziyinkimbinkimbi ngokumangazayo, okusho ukuthi njengomkhiqizi webhayisikili oxhasa iqembu elilodwa leWorld Tour, uzothola amaphuzu amaningi ngokulingana kunomkhiqizi oxhasa amaqembu amathathu. Ngoba uma uxhasa amaqembu amathathu ohambo lomhlaba, ukunqoba kweWorld Tour kulula kakhulu. Kunokulungiswa okukodwa kuphela okuncane, umehluko wamaphoyinti aphezulu unhlanu kuphela ngomjaho ngamunye, kepha kusabalulekile uDan.
Ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi - Sekuyi-.
Ngu- ILapierre Xelius SL enamaphuzu ayi-102 GCN.
Ngokuphindaphindiwe, bekukhona ukunqoba kwesiteji eCriterium du Dauphine naseVuelta a Espana, kepha impela ukunqoba kuka-Arnaud Demare eMilan-San Remo bekuvele kungoMashi. Kukonke, lokhu kusho ukuthi baqoqe amaphuzu anele ukuwathola kalula kwiTopTen. Esikutholile kuthakazelisa, nokho, ukuthi uDemare waya kule modeli, okuyi-light version yeLapierre, ngokungafani ne-Aircode okuyimodeli esheshayo yeSprinter ephepheni. - Endaweni yesishiyagalolunye yiRidley Helium SL enamaphuzu ayi-114 GCN.
Ngonyaka odlule iHelium SL yathatha indawo yeshumi ohlwini lwethu lwamabhayisikili aphumelele kakhulu, ngakho kulo nyaka yakhuphuka endaweni eyodwa. Iphumelele iTurkey yasePoland ngokuphelele, izigaba eGrand Tours kufaka noThomas De Gendt eMont Ventoux, yize umuntu engakhohlwa ukuthi uma kucatshangelwa okunye okwenzeka eMont Ventoux ngalolo suku. Ngeshwa, lesi kungaba yisikhathi sokugcina lapho sizobona khona i-Helium SL ku-World Tour, kodwa ungadangali isikhathi eside ngoba uRidley usungule iHelium entsha, elula futhi ezobonakala ngo-2017. - Mhlawumbe i-SSL.- Endaweni eyisishiyagalombili, enamaphoyinti angu-136 we-GCN, yiScott Addict, elinye ibhayisikili le-featherweight elizodinga ukuvuselelwa maduzane njengoba laqalwa emuva ehlobo lika-2013.
Kepha akumangazi ukuthi ingene kwabayishumi abahamba phambili, ngenxa yokusebenza kuka-Esteban Chaves othile, obephumelele kaningi kulo nyaka futhi owaziyo ukuthi bekuzokwenzekani uma egcina ijezi elibomvana ekugcineni kweGiro d'Italia - Yebo - Inombolo yesikhombisa yiCervelo S5 enamaphuzu ayi-150GCN. Manje leli bhayisikili selibe nochungechunge lwemiphumela ehlaba umxhwele kulo nyaka. UMark Cavendish ugibele izigaba ezine eTour de France, uStephen Cummings uwine owodwa, futhi enye into ekhuluma ngaleli bhayisikili ukuthi iCervelos imise abagibeli ngo-R5 okhanyisela kakhulu kuyo yonke imijaho ngaphandle kweParis- Roubaix ngakho-ke banesigaba esisodwa ukukhetha, i-aerodynamic S5.
Lokho kusho ukuthi zonke izinqobelo eziyishumi kule sizini bezikuleli bhayisikili. Ngizokutshela okuthize uDan, okungenani ngishilo ukuthi leli bhayisikili belisebenza kangcono kwi-GCN World Tour kuneqembu eliku-UCI World Tour. Ngicabanga ukuthi lokho kukhombisa ukuthi okwethu kungenzeka kulunge. - Impela. - Endaweni yesithupha, enamaphuzu we-171 GCN, yi-Specialised Venge Vias.
Ngakho ibhayisikili lesibili le-aero kwabayishumi abaphezulu, ngemuva kweCervelo S5. Yebo, lesi isithuthuthu esithile sasesiteji okusho ukuthi asisetshenziswa njengamanye amabhayisikili amaningi kuWorld Tour. Kepha ubusenonyaka ophumelele kakhulu, kufaka phakathi izigaba eziningana zeGrand Tour eqhutshwa ngabathandi bakaPeter Sagan noMarcel Kittel.
Ngicabanga ukuthi kulungile ukusho ukuthi lokhu kwamukelwa kancane kancane izinzuzo lapho sezikhishwe, kepha manje kunzima ukuzimisa - ezinhlanu, yiBMC Team MachineMC SLR01 enamaphuzu ayi-198. Manje, ngeqembu elilodwa vo kuWorld Tour, kuyimpumelelo enkulu kwi-BMC. Ikakhulukazi uma ucabanga ukuthi omunye wabashayeli babo abakhulu, uRichie Porte, unqobe umjaho owodwa weWorld Tour kulo nyaka.
Okunye kusekelwe ekusebenzeni kukaGreg Van Avermaet jikelele eTirreno-Adriatico, iMontreal GP futhi nakanjani ukunqoba esiteji eTour de France - kube unyaka oqinile futhi ongaguquguquki kubo - ngaphandle nje kwesikhulumi, e indawo yesine, iCanyon Ultimate CF SLX enamaphuzu angama-366 ukweqa okukhulu ngamaphuzu ayi-168 ngaphezulu kweBMC Team Machine. Leli bhayisikili selizuze iGrand Tour ngokuma kweVuelta kanye nezigaba eziningana zeGrand Tour kulo nyaka, futhi akungabazeki ukuthi lo kube unyaka omuhle wokuxhasa bobabili iMobistar neKatusha. Futhi ngokuthakazelisayo, uma singena ngokujula kancane emiphumeleni, sithola ukuthi iwine izigaba eziningi zezintaba kulo nyaka kunanoma iyiphi enye ibhayisikili.
Kunjalo, uma nje uthatha izigaba ezinzima kunazo zonke zango-2016, uzothola ukuthi iCanyonUltimate CF SLX ibe yiClimbing Bike of the Year - leso yisibalo esihle, akunjalo? - ngiyabonga, mlingani wami - ungachazi ukusebenza kwakho, kepha kuyisibalo esihle. - Endaweni yesithathu neyesine ohlwini lwangonyaka owedlule, ngokwengxenye ngenxa yokuwina omunye wemiklomelo emikhulu kakhulu kumabhayisikili abangochwepheshe, iParis-Roubaix, yiScott Folie leyo. Manje sekuphishekelwa nentengo yebhayisikili eguquguquka kakhulu ngemuva kokuthi uMat Hayman eyichoboze emgwaqweni oyigobolondo.
Kodwa futhi kudlalwe phakathi kokuthandwa nguCaleb Ewan no-Oliver Naesen abavela e-Orica nase-IAM Cycling, kuya kwaDan, ngasendleleni, okwenza kube yibhayisikili eliphumelela kakhulu emijahweni yosuku olulodwa. - O, iqiniso elikhulu. ibuye namaqiniso. - Indawo yesibili, indawo yesibili nendawo eyodwa kusukela ngo-2015 yiPinarello Dogma F8.
Kumangala kangakanani lokho? Hhayi kangako, impela. Uma ubheka imiphumela uzothola ukuthi ngempela ibiyibhayisikili lomgwaqo elihle kunazo zonke lango-2016, uma kuphela ngephuzu eli-1 - Iqiniso elihle - Futhi lokho bekungengenxa yokuthi uChris Froome ubeyigibele, uyikhohlwe Awucabangi ukuthi iGeraint UThomas uwine iPyrenees isiyonke kulo nyaka. Futhi bekukuhle kakhulu emijahweni yosuku olulodwa futhi.
I-Wout Poels neMichal Kwiatkowski bobabili bathole ukunqoba okukhulu kakhulu. NjengeFoil ngaphambi kwalo, leli ibhayisikili le-aero eliguquguqukayo kakhulu. Okokuqala, ibhayisikili lomjaho eliphumelele kakhulu lango-2016 yi-Specialised Tarmac.
Kunjalo, ngonyaka wesibili wokugijima, ibhayisikili elingasindi elivela kwaBig S liphethe uhlu lwethu ngamaphuzu amahle kakhulu we-661 GCN. Lawa amaphuzu aphindwe kayisithupha kunebhayisikili lethu le-10 elithengiswa kakhulu. Kungase kungamangali kakhulu uma ucabanga ukuthi abantu abanjengoPeter Sagan, Alberto Contador noVincenzo Nibali bonke bayalisebenzisa leli bhayisikili futhi, uma behlangene, iPalmares yabo iyamangalisa ngokwethembeka.
Yize ingeyona i-aerodynamic noma ibhayisikili elilula kunawo wonke, yize inezinto ezisezingeni leWorld Tour-grade isondela, uma ingekho ngaphansi, umkhawulo wesisindo seWorld Tour, umbuzo uyacela, uDan, mhlawumbe i-aerodynamics nesisindo esincane akuyona nje into Izinto imijaho yamabhayisikili iyawina - O, izwi lami. Umbuzo omuhle kangako. - Yebo. - Ngeke sicabange ngalokhu isikhathi eside, ngoba sinombuzo owodwa ovuthayo okufanele siwuphendule.
Imikhiqizo ethile, ngicabanga ukuthi iBMC nePinarello banemodeli eyodwa kuphela yabagibeli babo abangayisebenzisa kunoma iyiphi indawo kuyo yonke inkathi, okusho ukuthi zonke izinqobelo zizogxila kakhulu kulolo hlobo olulodwa. Ngenkathi eminye imikhiqizo, efana ne-Specialised and Giant, inikezela abagibeli bayo amamodeli afinyelela kwamathathu ongakhetha kuzo ezinhlobonhlobo zezwe, ukunqoba kwabo kusabalele kakhulu. Futhi lokho kucela umbuzo wokuthi ngubani owayekhiqiza amabhayisikili ngempumelelo kakhulu ngo-2016? Yebo, nathi sinomphumela.
Endaweni yesihlanu iBMC - indawo yesine iya eCanyon - indawo yesithathu iya ePinarello - indawo yesibili iScott - futhi akumangazi, empeleni, endaweni yokuqala njengoba benamaVenge Vias kunombolo yesithupha futhi babe ne-asphalt endaweni yokuqala, yona Yebo Kukhethekile. - Ake sihambe. Sinezibalo eziningi kakhulu nemininingwane yokukubonisa ukuthi besicabanga ukuthi uma ubuza ngakho kumazwana angezansi, singangena ngokujulile ezintweni ezikudatshana bukhoma.
Futhi mhlawumbe sithola nokuvela kubuhlakani bethu bezibalo ngakho-ke, ngisebenzisa lelo gama 'ubuhlakani' ngokukhululeka.
I-1x drivetrain yomgwaqo webhayisikili
Kungabonakala njengokuhlakaniphile uma ucabanga ukuthi kufanele asebenze nethoni lomgibeli wamabhayisikili wangaphambili kepha uyazi - ngicabanga ukuthi sidinga ukumbandakanya achaze, uma ngithembeke ngokuphelele - Yebo, i-algorithm eyinkimbinkimbi kungenzeka ingabi yisinaphi abanye benu - cha. Singathanda ukuzwa imicabango yakho nalokhu. Uyavumelana neshumi lethu eliphezulu? Laliyini ibhayisikili lakho olithandayo lango-2016, noma ngabe lalingelona eliphumelele kakhulu.
Shiya imicabango yakho kumazwana angezansi - Yebo. Futhi qiniseka ukuthi ubhalisela i-GCN, uma kuphela ngoba usendaweni efanelekile yesizini ka-2017, esizoyimboza ngazo zonke izindlela ngokushesha okukhulu - yebo. Sinezindatshana ezimbalwa ngemuva kokwenza lokhu.
Okokuqala kukhona ukuvakasha ezungeze ibhayisikili likaChris Froome pro, iPinarello. Noma i-Specialised Tarmac kaVincenzo Nibali, ngokuqinisekile engenye yezinto ezinhle kakhulu futhi ephumelele - yebo. Ungamthola lapha phansi - Yebo.
Yiziphi izinhlobo zebhayisikili eziyishumi eziphezulu kakhulu?
Kuhle Brands Bike Mountain
UkuhambaAmabhayisikili. Wonke umuntu uzwile ngeTrekAmabhayisikili, akunandaba noma ngabe ungumgibeli webhayisikili noma cha.
Imijikelezo ye-Yeti. Imijikelezo ye-Yeti isuselwe e-USAshalokho kwenza ezinye zezinto ezintsha kakhuluamabhayisikili asezintabeniemhlabeni.
Nazi izesekeli zethu eziyishumi eziphezulu zebhayisikili lezintaba. Kungenzeka kungadingeki ngokuqinile, kepha kunezinto eziyishumi ezingathuthukisa isipiliyoni sakho sokugibela noma zenze impilo yakho isendleleni ibe lula. Iphakethe lokuhambisa amanzi.
Abantu abaningi babiza le mhlane yamakamela ngoba kwakungabenzi bokuqala. Kulezi zinsuku ziza zonke izinhlobo nobukhulu. Lesi yisikhwama seqembu le-Evoc lamalitha ayisithupha, ngakho-ke sincane.
Le yinto engingayisebenzisa kumadrayivu amafushane nasemjahweni. IMultitool, ngihamba nayo ohambweni lonke. Lena incane impela ngakho-ke ngizophuma kwezinye izimo eziphuthumayo, kepha futhi nginenye enkulu enethuluzi leketanga ngakho-ke kufanele likusize uma ungena kunoma yiziphi izinkinga nezinkinga zemishini.
Ibhokisi le-CO2. Yithuluzi elincane elihle. Kuhle futhi kulula, kukuhle ukuthola umoya esondweni lapho uthola isondo eliqhumayo.
Kutharesi lebhayisikili elisentabeni, ungahle udinge amabili ala ma-canister ongahamba nawo ngoba makhulu impela, noma ungahle uthande ukuletha ipompo lokuphumula uma kungenzeka. Kepha igajethi enhle encane. Kuyasiza nokuqinisa isondo elingenashubhu.
Abanye bagibela izibuko. Angizisebenzisi njalo, kepha ngokusobala zilungile uma libalele. Nginamalensi amnyama amnyama phakathi lapho.
Nginamalensi acacile lapho kunodaka ukugcina izinto zisemehlweni ami, kanye namaphinki ambalwa. Basiza ezimeni zokukhanya ezingezinhle. Yingakho ngivame ukuwasebenzisa uma libalele noma selimanzi mpela.
Ikhompyutha yebhayisikili. Le yiGarmin Edge 1000, phezulu kwemodeli yolayini engenza okuhle kakhulu. Lokhu kwenza imephu nokuqoshwa kwalokhu okushayelayo.
Ukwenza imephu kuhle impela uma wenza ukugibela okukhulu noma lapho ungazi ukuthi ukuphi. Empeleni ngisebenzisa i-Edge 510 ngakho-ke incane kakhulu ukugcina umkhondo walapho ngiya khona. Futhi ilungele iStrava uma ufuna ukwenza umjaho omncane emzileni.
Iqoqo lamalambu. Isethi enhle enhle engasindi kuhle ukukuyisa ekhaya uma kwenzeka ubanjwa ebumnyameni. Kepha ukugibela ebusuku kuyinto okufanele zonke izithuthuthu zebhayisikili zizame.
Lokhu kuvezwa kwe-USC, ngamalambu ayi-1200, kuzothatha amahora ambalwa ngakho-ke ukukhanya okuqinile impela. Kungokuhlangenwe nakho okuhlukile ukushayela ebusuku futhi kumnandi kakhulu. Unogada wodaka.
Kulezi zinsuku kukhona lezi zincane, izifenda ezisesitayeleni ngempela. Kudala kwakuyizinto ezibukeka kabi kakhulu engingakaze ngifune ukugibela ibhayisikili lami. Lezi ezincane zihamba ngaphansi kwemfoloko yakho crane futhi empeleni ngishayela enye yazo kaningi manje.
Ziyasebenza impela uma ubheka ukuthi zincane kangakanani, futhi vele ugcine okuningi kwalelo fafaza kungangeni emehlweni akho. Umnikazi webhodlela. Lokhu kuphume emfashinini isikhashana lapho wonke umuntu esebenzisa ubhaka, kepha kubonakala sengathi abantu abaningi kulezi zinsuku sebebuyile ekusebenziseni ikheji lamabhodlela ukugwema ukuthwala ubhaka emhlane.
Ohambweni olufushane, lokho kuzwakala kungumqondo omuhle kimi. Ukubuyela emuva okuncane futhi unganyakaza kangcono. Kepha-ke ohambweni olude ucabanga ukupakisha amathuluzi amaningi namanzi athe xaxa nokudla kuphakethe elilodwa.
Uma kungenjalo, zama ibhodlela kumnikazi webhodlela. Amapayipi amadolo, njalo umqondo omuhle. Kuyinto yokuqala ewela phansi kaningi, futhi kubuhlungu ngempela.
Impela kuyinto ethuthukise izingcindezi eminyakeni embalwa edlule. Ungathola amaphedi wamadolo amahle impela, angasindi ongawanyathela usuku lonke, futhi amanye amaphedi wamadolo ahlinzeka ngokuvikelwa okuningi futhi asenethezekile ngakho-ke kufanelekile ukuthenga iphedi yamadolo ezolingana nesitayela sakho sokugibela, kepha angishayeli imvamisa kulezi zinsuku ngaphandle kwakhe. Amakhamera wesenzo.
Izinzuzo zihamba yonke indawo kulezi zinsuku. Kuhle impela ukunamathela kumakalabha, isifuba nokulandela abangane bakho, kodwa futhi kuwumqondo omuhle ngempela ukuzithwebula ngenkathi ushayela. Ziqhathanise nezindatshana zethu zokuthi-kanjani uma ufuna futhi ubone ukuthi ngabe ukulungisa kahle noma okungalungile.
Ngakho-ke nazi izesekeli zethu eziyishumi eziphezulu zebhayisikili lezintaba. Uma uthanda le ndatshana, yithande ngezansi bese ushiya amazwana futhi, futhi usazise ukuthi uthanda ukusebenzisa ini ngenkathi ushayela. Ukuthola ama-athikili amaningi avela ku-GMBN, chofoza lapha ukuthola izisekelo zokuma noma ukuthola izeluleko zethu eziyishumi zokugcina isondlo, chofoza lapha.
Ungangichofoza futhi uma ungathanda ukubhalisela i-GMBN.
Uyisho kanjani inkampani yebhayisikili?
Ama-ekseli aphindwe kabili.
Leli ibhayisikili lasentabeni, futhi inhliziyo yanoma iliphi ibhayisikili luhlaka. Ake siqale ngezingxenye zozimele. Lawa ishubhu ephezulu, ithubhu phansi, ithubhu yesihlalo, ukuhlala kwesihlalo nokuhlala kweketanga.
Indawo engezansi ibizwa ngegobolondo lobakaki elingezansi. Ngaphambili impela kwebhayisikili lakho kukhona ithubhu yekhanda, lapho kutholakala khona ishubhu lesithutha. Lokhu kuhamba ngokushelela sibonga kusethi yamabheringi namabhere ngokuhlangana okwaziwa njengezinga lentela.
Ngaphezulu kwalapho kukhona ama-headset spacers nesiqu. Isiqu, esibopheleke kwi-handlebars, sinamathiselwe kushubhu elishintshayo ngentambo nezikulufi zokuqinisa. Emabeleni akho uzothola izigaxa zamabhuleki, ama-shift levers, ama-plugs nama-plugs wokuqeda.
Konke lokhu okungenhla ngokuhlangene kubizwa ngokuthi yi-cockpit. Ukuya phansi yimfoloko yakho, kulokhu okuyimfoloko yokumiswa. Lesi sihloko sibizwa ngokuthi umqhele.
Amanye amabhayisikili eza nezimfoloko eziphindwe kabili zomqhele ukuzinza okwengeziwe. Umqhele uphethe ama-stanchion akho okufanele uzame ngawo wonke amandla ukuthi ungaklwebhi. Ungalengisi ibhayisikili lakho nge-kickstand kuma-chions.
Ngezansi kwe-caliper yakho ehlala kudiski yakho lapho ucindezela i-lever brake. Amanye amakhalipha ayimishini, amanye anama-hydraulic. Amabhuleki we-Hydraulic acindezela uketshezi ngepayipi, kuyilapho amabhuleki ayimishini edonsa okhalayo ngentambo Ibhayisikili elilinganiselayo liyinto eyindilinga.
Uma uthenga isondo langaphambili nangemuva ndawonye, ​​ibizwa ngevili. Zonke izingxenye zamasondo akho zibanjiwe kanye nezipikha ezifakwe erimu lakho yilabo bafana abancane. Babizwa ngezingono.
Umphetho uyisiqu se-valve esisetshenziselwa ukupompa umoya kumasondo akho. Maphakathi ne-impeller kukhona ihabhu futhi kukhona amabheringi kuhabhu. Ihabhu leli lizungeza i-eksisi.
Emabhayisikili amaningi asezintabeni, lokhu kunesimo se-thru-axle esingasuswa noma sifakwe ngesandla. Ihabhu lekhasethi esondweni elingemuva. Umshini we-ratchet wakhiwe kulokhu, okwenzelwe ukufaka ikhasethi.
Ikhasethi liyiqoqo lamagiya angashintshwa empeleni ngokuthanda. Ubukhulu begiya ngalinye buchazwe ku-t. kulinganiswe inani lamazinyo elinalo, futhi la mazinyo aklanywe ngokukhethekile ukusebenza ngeketanga.
Izingalo ezincanyana zinanyathiselwe kulolukhuni olugijima kusethi yamabherethi angaphakathi kwegobolondo lobakaki elingezansi. Uthi lokuphotha kanye namabheringi kubizwa ngokubizwa ngokuthi ubakaki ongezansi. Ingxenye enawo wonke amazinyo ibizwa ngokuthi yi-chainring.
Amanye amabhayisikili anezi-3 zazo. Ekupheleni kwezingalo ezi-crank kukhona ama-pedal angatholakala ngezimo eziningi ezahlukene. I-crankset, i-chain, i-derailleur, ne-cassette kubizwa ngokuthi yi-drivetrain yakho Ku-bike yokumiswa egcwele, uzothola izinto ezahlukahlukene ezixhuma amasondo angaphambili nangemuva ebhayisikili, abizwa ngokuthi ama-suspension linkages.
I-centerpiece yisidambisi sakho. Lokhu kuvame ukunamathiselwa ekuxhumaneni nashubhu ephezulu ngakolunye uhlangothi, noma ishubhu phansi ngakolunye. Phezulu sinesihlalo noma isihlalo.
Amagama womabili ayashintshana, kepha abanye abantu bacabanga ukuthi kuwukugabadela ukukubiza ngokuthi isihlalo. Okwami ​​anginandaba nokuthi ukubiza kanjani uma nje ukwenza. t lungisa abanye abantu.
Ngakho-ke ngisanda kukhuluma ngezingxenye ezingaphezu kwezingama-50 zebhayisikili elisentabeni, kepha zonke lezo zingxenye zingahlehliselwa emakhulwini ngaphezulu. Ngakho-ke, bhala le migomo phansi kumazwana, futhi uma ngabe unesithukuthezi ngempela, bona ukuthi ungalithola inani eliqondile lamagama engiwasebenzisile kule ndatshana. Futhi ngitshele ukuthi ngiyiphimisa kanjani i-derailleur.
Ingabe ungomunye walabo bantu abathi 'derailleur'? Kunoma ikuphi, ngiyabonga ngokushayela nami namhlanje, sizobonana ngokuzayo.
Ngobani amagama ezinkampani zamabhayisikili?
Uchungechunge olulandelayo lwamagama ezinkampani zamabhayisikili luvela kubathengisi abase-United States abagxile ekuthengisweni kwamabhayisikili. I-Odyssey yebhayisikili. I-Alki Bike & amp; Ibhodi. Inkampani ye-Alpha Bicycle. Ibhayisikili Lezinkanyezi laseMelika. Ukujikeleza kwe-Art. Avanti. Inkampani yeBarnes Cycle.
Yimuphi umkhiqizo webhayisikili ohamba phambili emhlabeni?
Yize iTrek kungaba igama elibonakala kakhulu elenziwa yile nkampani, inolayini ogcwele wemikhiqizo esitebeleni sayo. Leyo minye imikhiqizo ifaka i-DreamBikes, iBontrager ne-Electra. Kuze kube ngo-2008, inkampani iphinde yakhiqiza imijikelezo yeLeMond, i-aline yamabhayisikili eqale yakhiwa nguGreg LeMond, umgibeli wamabhayisikili wase-US owine iTour de France.
Zingaki izinhlobo zamabhayisikili asezintabeni akhona?
Njengomkhiqizo wamaphayona, kwavula indlela yezinye izinhlobo eziningi ezizayo emakethe. Kuze kube manje, le nkampani ewina imiklomelo ikwazile ukudala izinhlobo ezi-16 zamabhayisikili asezintabeni. Lokhu kubandakanya amabhayisikili asezintabeni abesifazane kanye nezingane.